Gadzirira Mac yako pakuuya kweMacOS Sierra | Ndinobva mac
Gadzirira Mac yako pakuuya kweMacOS Sierra
Isu tave pedyo nekugamuchira inotevera vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu yeMacs zviri pamutemo uye izvi zvinotisvitsa kune imwe yenguva idzodzo kana zvakanaka kumira zvishoma mutinhimira wekuvandudzwa mumutsara uye funga kuisirwa mune yakangwarira nzira . Chokwadi ndechekuti aya matanho atinozoona pazasi anogona kuitwa chero nguva uye hazvidiwe kumirira system yekugadzirisa kuti iite kudaro, asi munguva dzino apo isu tichaisa sisitimu nyowani yekushandisa inogona kunge iri nguva yakanakisa nekuti zvinoda mamwe matanho mashoma pane kudzoreredza pamusoro pezvatinotova nazvo.
Zvakanaka, isu tese tiri pachena kuti inotevera Mac inoshanda sisitimu ichadaidzwa kuti macOS Sierra uye kuti mune iyi vhezheni dzimwe nhau dzinonakidza dzinowedzerwa asi nguva dzose pahwaro hwechizvino operating system, OS X El Capitan. Kuvhurwa kwesystem nyowani ichaitika Chipiri chinotevera, Gunyana 20 uye basa ratiri kuzoita izvozvi nderekuti vagadzirire Mac yezuva iro. Neichi tinowana yakawanda disk nzvimbo, ita kuti Mac igare yakachena uye yakagadzirira iyo yekuvandudza, uye chiitiko chiri nani chekushandisa neiyo nyowani system.
Wekutanga uye wekutanga kutaura kuti pane nzira mbiri dzekuvandudza Mac inoshanda sisitimu, yekutanga ndeye kungotora system kubva kuMac App Store uye nekutevera matanho ekumisikidza, uye chechipiri kuisa system kubva pakutanga. Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha usati waita oparesheni chakakosha kuita kuchenesa kwakawanda kwekushandisa, mafaera uye imwe data yatisingachashandise uye zviri pachena kuti inoita kopi yekuchengetedza usati watora matanho.
1 Kuchenesa Mac
2 Dzorera Mac yako
Izvi mune zvese zviitiko zvakakosha danho uye zvichatitorera imwe nguva, saka ngatizvitore nyore uye tiite basa rakanaka. Kune iri basa isu zvakare tine zvimwe zvinoshandiswa zvinozotibatsira kuchenesa Mac, semuenzaniso CleanMyMac, asi zvakanakisa kubvisa cache mafaira, bvisa zvisina kufanira kuwedzerwa, mafaera kubva kumagadziridzo ekare, installers uye ese iwo mafomu atisina kushandisa neruoko kweinopfuura mwedzi uyezve tinopfuudza kunyorera kana isu takatenga.
Chinhu chakanakisa kuenda zvishoma zvishoma uye kusiya chete zvakakosha zvinhu zvatinonyatsoshandisa paMac. Nekufamba kwenguva tichava neMac izere nezvinhu zvatisingashandise kana tichiita izvi zvishoma kuchenesa mune yega yega yekuvandudza tichawana chiitiko chiri nani munzira dzese neiyo nyowani yekushandisa system.
Dzorera Mac yako
Zvinogoneka kuti vashandisi vazhinji vanoti hazvidiwe uye tinogona kunyatsoita tisinazvo, asi zvino kana dambudziko rikaitika uye tisina kopi yakaitwa, zvese kuzvidemba saka chechipiri chinhu chatichaita kana tangowana iyo Mac yakachena yemafaira, data uye zvinyorwa zvatisingade, ndizvo kopi yekuchengetedza.
Nzira iri nyore yekuita iyi kopi kushandisa chishandiso chakapihwa na lkuva neApple muMacs inonzi Time Machine. Matanho acho ari nyore uye tinokwanisa zvakare kuchengetedza makopi chero kwatinoda, ingave yedu Mac's disk kana dhisiki rekunze Time Machine inopa sarudzo yekugadzira backup makopi otomatiki kuti dhata redu rigare rakatsigirwa uye ndizvo zvatinokurudzira pane ini ndiri kuMac kune iri basa. Aya ndiwo matanho ekuita backup:
Isu tinovhura Nguva Machine kubva kuchiratidzo mubar yemenyu kana kubva kuLaunchpad mune iyo «vamwe» dhairekitori
Kubva pane yekufarira paneli tinogona kumisikidza otomatiki makopi kana tinya kuti uchengetedze kopi pane diski
Isu tinosarudza backup kana isu tatova nayo yakagadzirirwa kana tinya pane yakabatana yekunze disk
Dzvanya pakachengetedza uye ndizvozvo
Kubva pane icon iri mumenu bar tinokwanisa kugadzira backup nekudzvanya zvakananga pane sarudzo "Ita backup ikozvino". Chero zvazvingaitika ichi chinhu chingave chisingadiwe kune vese vashandisi asi zvinokurudzirwa kuita kudaro kuti udzivise matambudziko uye kugara uine Mac pakuita zvakanyanya. Rangarira kuti macOS Sierra 10.12 ichave iripo svondo rinouya uye isu tinogona kutanga kuita izvi izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Gadzirira Mac yako pakuuya kweMacOS Sierra
Alex Rodriguez akadaro
Zvakanakisa kuisa kubva pakutanga, kubva paUSB
Pindura kuna Alex Rodriguez
Merci Durango akadaro
Unozvikurudzira sei izvi kana matekinoroji eApple akasapa zano.
Pindura Merci Durango
Nekuti iwo maitiro ane imwe nhanho yekuoma kunzwisisa isiri nyore kune vanhu vazhinji vanongo gumira pabasa kana kudzidza pa mac avo, saka kana chero chikamu cheichi chiitiko chisiri icho chinogona kupedzisira chave kukanganisa ruzivo rwakakosha izvo Chokwadi, chichava chikonzero chezvirevo nevashandisi.
CleanMyMac zvakakomba…. ???
Durango, urikuti kudii?
Jose Fco Kanda akadaro
Ndakatengesa yangu zvishoma ndichagadzirira. Imwe neimwe yekuvandudza yakadhonza zvimwe zviwanikwa Ini ndaive i7 uye 16gb yegondohwe uye 21,5 mbiri mbiri yemac yakanga ichienda nekukurumidza. Hongu, ndakaita zvese kubva pakutanga. Zvakatora nguva imwecheteyo kuti dzorezve bhu ray. Nguva imwe chete
Pindura kuna Jose Fco Cast
Alonso de Entrerríos akadaro
Chenesa My Mac inogona kushandiswa zvakakwana, haina kukuvadza komputa kana iyo system zvachose.
Kune rimwe divi, iyi nyowani vhezheni ye OS X haina kuwedzera chero chinhu chitsva kune izvo El Capitan atove nayo (kunze kweSIRI uye akati wandei emapikicha).
Kutendeseka, hazvina kukodzera kuisa kana komputa yako ichishanda mushe
Pindura Alonso de Entrerríos
Roberto Payares Ochoa akadaro
akanakisa ezvakanakisa, zvavanogona kuita uye zvakandishandira, kushandukira kune SSD drive, yangu macbook pro ine i7 uye 16gb mugondohwe, ine yekutanga 500gb hard disk, kunyangwe hazvo ndakaisa yakawanda sei kubva scratch bvisa zvinhu, uchishandisa cleanmy mac, nezvimwe, nezvimwewo, zvaive zvichiri kunonoka, ini ndaive muranda wenzvimbo yemahara uye zvisina basa maapplication nezvimwe, asi kunonoka ikoko. Ini pakupedzisira ndakafunga kupa imwe yekupedzisira mukana uye shanduko kune SSD drive, yakaiswa kubva pakutanga, chii fungidziro zvakanditorera nguva refu kugadzira kofi kana zvese zvaiswa uye zvichingodaro, kushungurudza zvivakwa nemidziyo sechiedza, kutangazve kunotora 10 masekondi uye ndisati ndamboidzima nekuti zvakatora kunge maminetsi matatu kusvika kuchiratidziro chemumba, kunyangwe ipapo ndakaremadza firevault nekuti yainonoka. Zvino iri Svondo ndakaisa iyo GM yeSierra uye iyo yakatora maminetsi matanhatu kuti iite update, yakavanza iyo firevault mune zvishoma pane chero chinhu, ini handina kuziva payakapera. Tsika yenyaya iyi ndeyekuti, chero munhu ane mac uye ari kutotaridza zviratidzo zvekuchembera nekuti anononoka, uye kana sarudzo yekuchinjira kune nyowani isiri muzvirongwa zvake, pamwe neni nekuti ini ndine farira kwazvo yangu 3 ″; Chaizvoizvo, SSD inokuvandudza iwe kusvika pakakwirira, timu yako inozvikoshesa uye ichakuratidza. Ini ndinofunga kuti neizvozvo ndine mamwe makore akati wandei kana sekureba seSSD, asi ndinofara zvikuru kunyanya nekuda kwekumhanya kwazvino kwazvinochengetedza zvisinei kana iine gb yemahara nzvimbo, zvakare kuti bhatiri inogara kwenguva yakati rebei, zviripachena nekuti hapana michina masystem mukati.
Pindura kuna Roberto Payares Ochoa
Jose Carlos akadaro
Ndinobvumirana naRoberto. SSD hupenyu. Kana iri mari ndichaisa 500 gb samsung SSD. Kana ndine pasita, 1TB
Pindura kuna Jose Carlos
Mhoroi, zvese zvemunyori wenyaya uye wevatori vechikamu: kune avo vedu vane chikamu chakagadzirwa neBootCamp ine Windows yakaiswa, zvinokwanisika kuita yakachena kumisikidza pasina kudzima zvakanzi partition naWin, ndiko kuti yakaiswa muchikamu cheMacOs pasina kugadzirisa imwe yacho?
Thanks uye nezve
Iris Martinez akadaro
Mhoro! Ndanga ndine mac yangu kweanenge makore 3-4 uye handisati ndamboita yakachena kuisa. Ini handidi kubata chero chinhu pazvikamu uye nezvimwe nekuti ndine chokwadi chekuti ndichavhiringidza ... Mubvunzo wangu ndewokuti; Kana ndikadzima zvese kubva kumac yangu ndoisiya sekunge yanga iri nyowani kubva kufekitori, kubva kuApp Store panobuda macos sierra, ndinogona kuiisa yakananga ndisina kumisikidza iyo yapfuura? Kutenda mberi.
Pindura Iris Martínez
Zvinoenderana. Ndeipi OS X yawakaisa parizvino?
Jose Eduardo Troconis Ganimez akadaro
Chenesa mac yangu unofanirwa kuitenga nekuti kana zvisiri izvo iyo yekuchenesa yainoita inongova mashoma megabytes !!!
Pindura kuna Jose Eduardo Troconis Ganimez
Aya ndiwo maitiro aunogona kuchengetedza yako MacBook's Trackpad kubva kungangoitika tsaona
Microsoft inorwisa Apple zvakare neSurface Pro 4